Indlu yaseSaiRia eUthandi Beach - I-Airbnb
Indlu yaseSaiRia eUthandi Beach
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguKandasamy
Wamkelekile kwindlu yaseSaiRia.
Indlu ekwindlela yase-ECR elunxwemeni ibonelela ngemfihlo yekhaya kodwa izibonelelo zendawo ekuchithelwa kuyo iiholide. Le ndlu ibekwe kwi Uthandi beach entle enembono entle ukusuka kwi balcony yamagumbi okulala. Ukude nje ukusuka elunxwemeni, eli gumbi limnandi lokulala leNdlu yaseBeach ilala ukuya kuthi ga kwi-10 yabantu.
Uya kuyithanda le ndlu ngenxa yoyilo lweplani evulekileyo yangoku, iimbono kunye nendawo. Le ndawo ilungele iintsapho ezinabantwana, kunye namaqela amakhulu.
Wonwabele amava kwaye wenze inkumbulo yakho.
Umnyango uvula iplani yokuvula ikhitshi lokutyela kunye negumbi lokuhlala. Igumbi lokuhlala lineesofa zokuhlala ezi-2x3 ezinomabonakude ononxibelelwano lwesathelayithi. Kukho kwakhona ukufikelela kwi-Wi-Fi apha.
Igumbi lokutyela elijonge elunxwemeni.
Esi sithuba sikhethekileyo sidibanisa usapho lonke ukuba lusebenzisane kuwo onke amanqanaba ngokukhanya kwendalo okuninzi ukusuka macala onke kunye nomoya ongangcoliswanga wendalo waselwandle ngeefestile.
Le ndawo ivulekileyo ikhokelela kwigumbi elinye lokulala ukuze ufikeleleke lula kunye nendlu yangasese eyahlukileyo kunye neshawari
4.51 · Izimvo eziyi-47
yingingqi ekhuselekileyo nethe cwaka enamapolisa ahlala ebeka iliso kwindawo eselunxwemeni ngoxolo loluntu
Umbuki zindwendwe ngu- Kandasamy
Iindwendwe ziya kuba nempendulo yokuqala evela kumamkeli kwaye emva koko abamkeli-zindwendwe phambi kokuhlala.
Iindwendwe ziya kuba nommkeli wabahlali/umgcini wendlu ngelixa zihleli
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Chennai